Manamaivana Ny Famerana Ny Fampiharana Fandefasan-kafatra i Arabia Saodita, Saingy Mbola Voaràra Ny WhatsApp Sy Ny Viber · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2017 6:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Português, Español, English
Riyadh, renivohitra Saodiana amin'ny alina. Sary nozarain'ilay mpisera apriltan18 tao amin'ny Pixabay, eo ambanin'ny Creative Commons License (CC0)
Taorian'ny sivana goavana nandritra ny efa-taona mahery, nanamaivana ny famerana ny fampiasana ny fampiharana antso antserasera sy ny fandefasan-kafatra amin'ny aterineto (VoIP) i Arabia Saodita.
Tamin'ny sioka iray tamin'ny 13 Septambra, nanambara ny minisitry ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalam-baovao Saodiana, Abdullah Al-Swaha, fa hoesorina ao anatin'ny herinandro ny fandraràna ny VoIP, fihetsika izay noderain'ireo mpiserasera Saodiana nanakiana mafy ny politikan'ny sivana VoIP .
Manomboka izao, ho hita ao amin'ny efijerin'ny findaiko io
Nanomboka nanakana ny fampiharana VoIP i Arabia Saodita tamin'ny Jona 2013 raha nandràra ny Viber noho ny tsy fanatanterahany ny fepetra takian'ny lalàna eo an-toerana. Tamin'izany fotoana izany, tsy namaritra mazava izay fepetra voalaza fa tsy nohajaina ny Vaomieran'ny Teknolojiam-pifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao (CITC), izay manara-maso ny fifandraisandavitra ao amin'ny firenena. Mihevitra ny media fa noho ny ezaky ny governemanta Saodiana hanara-maso ireo fampiharana ireo na ny hiaro ireo mpandraharaha finday ao an-toerana mba tsy ho matiantoka no anton'ny fanapahan-kevitra.
Nanomboka teo, nosakanan'ny governemanta tanteraka na amin'ny ampahany ireo fampiharana marobe hafa tahaka ny WhatsApp, Skype, Facebook Messenger ary ny FaceTime. Tamin'ny septambra 2016, voasakana ihany koa ny antso ao amin'ny LINE.
Nanazava tamin'ny fanambarana tamin'ity herinandro ity ny CITC fa ny fanalefahana ireo faneriterena ireo dia “mifanaraka amin'ny fironana maoderina”, izay mihevitra fa “ny fiankinana amin'ny fidiram-bola amin'ny tahiry (finday) sy ny tolotra fanampiny no fenitra iraisam-pirenena tokony harahin'ireo mpandraharaha ao amin'ny fanjakana”.
Misahana ny fandrindrana ny sehatry ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalam-baovao manana tanjona manatratra ny “tontolon'ny fifaninanana hisian'ny fanomezana tolotra ambony kokoa ho an'ireo mpanjifa sy tontolo manintona ho an'ireo mpampiasa vola”, ny CITC no tompon'andraikitra amin'ny fanivanana ireo tranonkala an'arivony sy ny fandefasana fangatahana any amin'ny sehatra media sosialy rehefa mangataka amin'izy ireo ny manampahefana mba hanivana votoaty manafintohina na votoaty hafa .
Matetika ny CITC no lohahevitry ny tsikera avy amin'ny Saodiana, izay niampanga azy ho mampandroso ny tombotsoa ara-barotr'ireo mpandraharaha finday amin'ny alalan'ny fanakanana ny fampiharana VoIP, fa tsy miaro ny zon'ny mpisera.
Tamin'ny fanambarana mitokana, nilaza i Al-Swaha, izay miasa ho minisitry ny teknolojiam-pifandraisana sy ny fampahalalam-baovao ary filohan'ny CITC fa natao ny fanovana ny politika mba hanomezana “tolotra tsara indrindra mifanaraka amin'ny hetahetan'izy ireo sy hanomezana fahafaham-po ny filan'izy ireo”, sy mba “hamolavolana fiarahamonina nomerika mifanaraka amin'ny tanjon'ny Vinavinan'i Arabia Saodita 2030. ” Ny Vinavina 2030 dia drafitra fanavaozana ara-toekarena avy amin'ny fanjakana izay mikendry hampivelatra ny toekarena sy hampihenana ny fiankinan-doha amin'ny vola azo avy amin'ny solika.
Nanankery tamin'ny 20 Septambra ny ampahany tamin'ny fanesorana ny fandraràna, ka afaka manao antso amin'ny fampiasana fampiharana toy ny Line, Snapchat, FaceTime, Skype, Telegram sy Tango ireo mpiserasera ao Arabia Saodita.
Na izany aza, nitatitra ireo mpiserasera sy ny fampahalalam-baovao ao an-toerana fa mbola voasakana ireo fampiharana hafa tahaka ny Viber sy Whatsapp.
Ireto ny fampiharana nesorina ny sakana
Mitohy ny fahatarana noho ny fanakanana hatrany ny antso Whatsapp. Anisan'ny ianantsika ny zava-tsarotra, ary tsy misy fiovana tonga mora foana
Nilaza tao amin'ny Twitter ny mpitondratenin'ny CITC, Adel Abu Hameed, fa nesorina tamin'ireo fampiharana izay “nahafeno ny fepetra takian'ny lalàna” ao amin'ny firenena ny fandraràna. Nanampy izy fa ireo fepetra ireo dia ahitana: rafitra mazava sy fepetra amin'ny fifampiraharahana amin'ny tahiry manokan'ny mpiserasera ao amin'ny fanjakana, manaisotra votoaty manitsakitsaka ny lalàna eo an-toerana (raharaha manahirana ao Arabia Saodita), ary ny fiarahamiasan'ny mpamatsy tolotra miaraka amin'ny CITC mba hiatrehana izay tranga maika..
Mbola tsy mazava ny fomba nahafenoin'ny fampiharana VoIP (efa nosokafana) ireo “fepetra takian'ny lalàna” voalaza etsy ambony sy raha nisy ny fifampiraharahana teo amin'ireo orinasa manana azy ireo sy ny governemanta Saodiana.
Miteraka ahiahy ny fanapahan-kevitry ny Snapchat vao haingana hanaisotra ny fantsona amin'ny teny Arabo ny Discover an'i Al Jazeera ao Arabia Saodita noho ny fangatahan'ny CITC fa manery hatrany an'ireo sehatra media sosialy sy fampiharana mba hanaraka ny lalàna momba ny famaizana ny heloka antserasera ny governemanta Saodiana. Nandritra ny krizy ara-diplaomatika tao amin'ny firenen'ny Helodrano, izay nanapahan'i Arabia Saodita, Bahrain, Emirà Arabo Mitambatra, ary Ejipta fifandraisana tamin'i Qatar noho ny fiampangan'i Qatar an'ireo firenena Golfa ho manohana ny “fampihorohoroana” sy ny vondrona islamista, dia lasibatra ihany koa ny Al Jazeera ao Qatar. Namoaka lisitra fangatahana ho an'i Qatar i Arabia Saodita sy ireo mpiara-dia akaiky azy, ka anisan'izany ny fanakatonana an'i Al Jazeera.
Sambany ny Snapchat tafiditra tamin'ny adihevitra momba ny sivana ambadika politika. Araka ny tatitra farany momba ny mangarahara ao amin'ny orinasa, tsy nahazo ny fangatahan'ny governemanta hanaisotra votoaty izay mety ho tsy azo ekena amin'ny fepetran'ny Fampiasana tolotra na ny Torolàlana nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taona 2016 i Snapchat.
Satria nanamaivana ny famerana ny fampiharana VoIP i Arabia Saodita, ahoana no fomba hanarahan'ireo fampiharana nosokafana ny fangatahan'ny manampahefana Saodiana amin'ny fanesorana votoaty sy tahirin'ny mpiserasera? Iray amin'ireo henjana indrindra ao amin'ny faritra ny lalànan'ny heloka antserasera ao Arabia Saodita. Manasazy hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina ny lalàna noho ny fitehirizana sy fanaparitahana votoaty “manohintohina ny filaminam-bahoaka, ny soatoavina ara-pivavahana, ny fitondran-tenan'ny daholobe, sy ny fiainana manokana.”
“Tsy afaka mampiasa fampiharana amin'ny antso am-peo na an-dahatsary ny mpiserasera raha tsy misy ny fanarahamason'ny CITC” hoy ny mpitondra tenin'ny mpandrindra tamin'ny resadresaka tamin'ny fantsom-baovao Al-Arabiya Saodiana. Ho amin'ny tombontsoam-bahoaka sy ny mpiserasera ireo fepetra ireo, hoy izy nanampy.